ग्लोबल आइएमई बैंक ‘ए’ क्लासको वाणिज्य बैंक, ग्लोबल बैंक र ‘सी’ क्लासको वित्तीय संस्थाहरू आइएमई फाइनान्स र लर्ड बुद्ध फाइनान्सको सफलतापूर्वक गाभिएर बनेको हो। बैंक ‘सबैको लागी बैंक’ भन्ने नारासहित स्थापना भएको हो। सबै बैंकहरु राजधानी केन्द्रित भएर आफ्ना हेड अफिस काठमाडौंमा राखिँदा यो बैंकले आफ्नो हेड अफिस उपत्यका बाहिर विरगञ्जमा स्थापना गरेको थियो।
विश्वस्तरिय बैंकिंग सेवामार्फत ग्राहकहरूलाई सेवा प्रदान गर्दै अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने लक्ष्य लिएको बैंकले संसारभर लोकप्रिय भएको सफ्टवेयर ‘फिनाकल (FINSCLE) प्रयोग गर्दै आएको छ। यो सफ्टवेयरले सबै ब्राञ्च र बैंकको कर्पोरेट स्थानहरूबाट ग्राहकको डाटाबेस प्राप्त गर्ने सकिन्छ। यो ग्राहक डाटावेसलाई म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेशन प्रणालीमा पनि जडान गरिएको छ, जसले सन्तुलित निर्णय निर्माणमा सहयोग गर्दछ। बैंकले देशको पश्चिममा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली (डीआरएस)को जडान गरेको छ। जुन काठमाडौंबाट लगभग २ सय किलोमिटर टाढा रहेको छ।
बैंक केबल आफ्ना ग्राहकहरूलाई गुणस्तरीय सेवाहरू प्रदान गर्न मात्र सफल भएको छैन। तर, यसको सम्पत्तिको उत्कृष्ट विविधीकरण गर्न पनि सफल भएको छ। बैंकको राष्ट्रिय चासोका क्षेत्रहरू जस्तै जलविद्युत्, उत्पादन, कपडा, सेवा उद्योग, उड्डयन, निर्यात, व्यापार र लघुवित्त आयोजना र अन्य विविध क्षेत्रमा आफ्नो पूँजी परिचालन गरेको छ। यो बैंक नेपालका केवल पाँच बैंकहरूमध्ये एक हो। जुन आधिकारिक रूपमा सरकारी लेनदेन सम्हाल्दै आएको छ। बैंकमा प्रवर्द्धकहरूको एउटा समूह रहेको छ जसमा स्वदेशी उद्यमी, राम्रो प्रतिष्ठित र सम्मानित व्यापारी/उद्योगपति हुन्, जसले आफ्नो बढ्दो व्यापारको क्षेत्रमा सफलता हासिल गरेका छन्।
ग्लोबल आइएमई बैंकको अधिकृत पूँजी २५,००० मिलियन हो र भुक्तानी पूँजी १८,९७५ मिलियन हो। प्रवर्द्धकहरूसँग बैंकको ५१ प्रतिशत सेयर छ भने बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर जनताको हातमा छ। बैंकले आफ्नो एटिएमको संख्यामा वृद्धि गर्दै २६१ वटा पुर्‍याएको छ। त्यस्तै बैंकको ब्राञ्चलेस बैंकिंगको संख्या २२९ रहेको छ भने ३ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि, देशको ७१ जिल्लामा रहेका छन्। बैंकका ग्राहक संख्या २० लाखभन्दा बढी पुगेको छ। बैंकले हाल सञ्चालनमा ल्याएका सेवा तथा सुविधाहरू निम्न लिखित रहेका छन्।
बैंकले डिपोजिट सेवा अन्तर्गत १९ किसिमका बचत खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ। त्यी बचत खाताहरू मध्ये ९ ओटा बचत खाता शून्य ब्यालेन्समै खोल्न सकिन्छ।
१. सबै नेपालीको बचत खाताः यो जिरो ब्यालेन्स मौजादमै नजिकैको ग्लोबल आइएमई बैंकको शाखाबाट खोल्न सकिने बैंक खाता हो। यो खाता खोल्ने ग्राहकले निःशुल्क चेकबुक र इन्टरनेट बैंकिंग सेवा प्राप्त गर्दछन् भने ग्राहकको अनुरोधमा भिसा डेबिट कार्ड र मोबाइल बैंकिंग सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
२. ग्लोबल सेयर लगानी खाताः यो खाता विशेषता सेयरमा लगानी गर्ने तथा अनलाइन सेयर कारोबारमा संलग्नका लागी तयार पारिएको हो। यो खाताले ग्राहकहरूलाई विभिन्न छुट दिनुको साथै बचतमा आकर्षक ब्याजदर पनि प्रदान गर्दछ। यो खाताका विशेषताहरूः
निःशुल्क आश्वा सेवा
एक वर्षको लागि मोबाइल बैंकिंग र भाइवर बैंकिंग निःशुल्क
एक वर्षको लागि निःशुल्क भिसा डेबिट कार्ड
एक वर्षका लागी निःशुल्क डिम्याट खाता खोल्ने सुविधा
मेरो सेयरको सुविधा (एक वर्षको लागि)
सेयर होल्डरको खातामा सिधैँ नगद लाभांश क्रेडिटको सुविधा
वार्षिक लकर चार्जमा ५० प्रतिशत छुट।
क्रेडिट कार्ड जारी शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट
३. ग्लोबल नभरत्न स्यालरी खाताः ग्लोबल नवरत्न स्यालरी खाता उच्च ब्याजदर र छुटहरू भएको बचत खाता हो। यो बचत खाता खोल्नका लागि कुनै पनि संस्थामा काम गर्ने १८ वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेर भएका ग्राहकहरूले रोजगारदाताबाट आधिकारिक पत्रसहित निवेदन दिनु पर्दछ। यो खातामा ब्याजदर ४ प्रतिशत वा समय समयमा सम्पत्ति दायित्व समितिबाट भएको निर्णय अनुरूप हुनेछ। ब्याजदर गणना दैनिक रूपमा हुनेछ भने त्रैमासिक रूपमा बैंकले व्याज खातावालाको खातामा जम्मा गरिदिनेछ। यो खाताबाट रकम संख्या र निकासीको रकममा कुनै प्रतिबन्ध छैन। यस्ता छन् यो खाताका विशेषताहरूः
एक वर्षसम्म निःशुल्क मोबाइल र भाईभर बैंकिंग सेवा
निःशुल्क इन्टरनेट बैंकिंग सेवा
एक वर्षका लागी निःशुल्क डेबिट भिसा कार्ड
वार्षिक लकर सुविधामा ५० प्रतिशत छुट
क्रेडिट कार्ड निकाल्न ५० प्रतिशत छुट
५ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बिमा
४. ग्लोबल नवरत्न बचत खाताः यो खाता खोल्नका लागी ग्राहकहरू न्यूनतम २५ हजार रुपैयाँ राख्नु पर्दछ। यो बचत खातामा उत्तम रिटर्न खोज्ने व्यक्तिको लागि लक्षित बचत बचत उत्पादन हो र उच्च ब्याज दर प्रस्ताव गर्दछ। यस्ता छन् यो खाताका विशेषताहरूः
एक वर्षसम्म निःशुल्क मोबाइल भाईवर बैंकिंग सेवा
निःशुल्क इन्टरनेट बैंकिंग
डेबिट भिसा कार्डमा ५० प्रतिशत छुट
ब्यालेन्स प्रमाणपत्र जारी गर्नका लागी ५० प्रतिशत छुट
५. ग्लोबल संस्थागत बचत खाताः यो गैरनाफामुलक संस्थाहरू एनजिओ, आईएनजिओ लक्षित गरी बैंकले सञ्चालनमा ल्याएको बचत खाता हो। संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुरूप गैरनाफामूलक भनी स्थापना भएका संस्थाहरूले यो बचत खाता खोल्न सक्छन्। यो खाता खोल्नका लागी न्यूनतम १ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्दछ। यो खाताका विशेषताहरूः
मोबाइल बैंकिंग सेवा
इन्टरनेट बैंकिंग सेवा
६. ग्लोबल सुरक्षा बचत खाताः यो बैंकले सञ्चालनमा ल्याएको विशेष खालको बचत खाता हो। जुनसुकै उमेर समूहका ग्राहकहरूले यो खाता खोल्न सक्छन्। न्यूनतम १० हजारमा यो खाता खोल्न सकिन्छ। यो खाताका विशेषताहरूः
ग्राहकको अनुरोधमा भिसा डेबिट कार्ड
७. ग्लोबल प्रिमियम बचत खाताः शुल्कमा अधिक खर्चबिना ग्राहकको बचत आवश्यकता पूरा गर्न यो खाता सञ्चालनमा ल्याइएको हो। ग्राहकमा बचत गर्ने बानी विकास गर्नका लागि यो बचत खाता सहायक सिद्ध हुने बैंकको विश्वास रहेको छ। यो खाता खोल्न न्यूनतम १० हजार रुपैयाँको आवश्यकता पर्दछ। यो खाताका विशेषताहरूः
इन्टरनेट बैंकिंग सेवा एक वर्षको लागी निःशुल्क
८. ग्लोबल शाखाविहीन बचत खाताः यो खाता शाखाविहीन बचत खाता भएको क्षेत्रबाट बैंकका एजेन्टहरुमार्फत खोल्न सकिनेछ। यो खाता खोल्न कुनै शुल्क लाग्ने छैन। यो खाताका विशेषताहरूः
९. ग्लोबल रेमिटेन्स बचत खाताः यो खाता विदेश जान चाहनेहरूको लागि सञ्चालनमा ल्याइएको हो। उनीहरूले यहाँ खाता खोली एकाउन्ट नम्बर प्राप्त गर्न सक्छन् र सोही एकाउन्टमा विदेशबाट रकम नेपाल पठाउन सक्छन्। यस्तो खाता खोल्नका लागी बैंकले कुनै प्रकारको शुल्क लिने गरेको छैन। यो खाताको विशेषताहरूः
ग्राहकको माग बमोजिम निःशुल्क चेकबुक
ग्राहकको माग अनुसार भिसा डेबिट कार्ड
होम लोनमा अन्य लोनको तुलनामा ०.२५ प्रतिशत छुट।
१०. ग्लोबल जन्मभूमि बचत खाताः यो खाता बैंकले विदेशमा गई काम गरिरहेका नेपालीहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो। यो खाताबाट उनीहरूले विदेशमा कडा मिहेनत गरी कमाएको रकमलाई नेपाल पठाउन सक्छन्। यो खाता विदेशमा बैंकका स्थानीय प्रतिनिधि बैंक रहेको स्थानबाट मात्रै खोल्न सकिन्छ। यो खाता पनि निःशुल्क खोल्न सकिन्छ। यो खाताका विशेषताहरूः
११. ग्लोबल विद्यार्थी बचत खाताः यो बचत खाता कलेज विद्यार्थीको लागि लक्षित बचत खाता हो। यो खाता भविष्यका कर्णधारहरूलाई बचत गर्ने बानी विकास गराउनका लागि लक्षित छ। यो खाता बैंकबाट निःशुल्क खोल्न सकिन्छ। यो खाताका विशेषताहरूः
पहिलो वर्षमा भिसा डेबिट कार्ड मागमा ५० प्रतिशत छुट
१२. वैदेशिक मुद्रा बचत खाताः यो खाता वैदेशिक रकम कमाउने ग्राहकहरूलाई लक्षित गर्दै बैंकले सञ्चालन गरेको खाता हो। यो खाताको विशेषताहरूः
१३. ग्लोबल बालबालिका बचत खाताः यो खाता बालबालिकाको भविष्यका लागि उनीहरूका अविभावकहरुमा बचत बानी विकास गराउनका लागी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यो खाता न्यूनतम १ सय रुपैयाँमा खोल्न सकिन्छ। यो खाताका विशेषताहरूः
निःशुल्क इन्टरनेट बैंकिंग सेवा पहिलो वर्षको लागि
शैक्षिक ऋणको लागी २५ प्रतिशत छुट।
१४. ग्लोबल कर्मचारी बचत खाताः बैंकिंग च्यानलबाट कुनै पनि संस्थाका कर्मचारीलाई तलब वितरण गर्नका लागि यो खाता सञ्चालनमा ल्याइएको हो। यो खाता निःशुल्क खोल्न सकिन्छ। यो खाताका विशेषताहरूः
मोबाइल बैंकिंगमा एक वर्षका लागि छुट
लकर रेन्ट सुविधामा ३० प्रतिशत छुट।
१५. ग्लोबल नारी बचतः नारीहरूमा बचत बानी विकास गर्नका लागि बैंकले यो खाता सञ्चालनमा ल्याएको हो। न्यूनतम मौजादमै नारीहरूले यो खाता खोल्न सक्ने बैंकले व्यवस्था मिलाएको छ। यो खाता सय रुपैयाँमै खोल्न सकिन्छ। यो खाताका विशेषताहरूः
मोबाइल बैंकिंगङमा एक वर्षका लागि छुट
१६. ग्लोबल साधारण बचत खाताः साधारण बचत खाता खोली बचत गर्न इच्छुक ग्राहक लक्षित खाता हो यो। पहिलो पटक बैंकमा खाता खोली बचत गर्ने चाहनेको आवश्यकता पुरा गर्न यो खाता सञ्चालन गरिएको छ। यो खाता निःशुल्क खोल्न सकिनेछ। यो खाताका विशेषताहरूः
१७. जेष्ठ नागरिक बचत खाताः देशका जेष्ठ नागरिकहरू लक्षित बचत खाता हो यो। जेष्ठ नागरिकहरूलाई सुविधायुक्त सेवा दिनु यो बचत खाताको लक्ष्य हो। यो बचत खाताको विशेषताहरुः
१८. ग्लोबल नारी शक्ति बचत खाताः यो बचत खाता धेरै आम्दानीको स्रोत भएका र आम्दानीको नियमित स्रोत भएका महिलाहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याइएको बचत खाता हो। आर्थिक सामाजिक रूपमा महिलालाई सशक्त बनाउनका लागि यो खाताले सहयोग पुर्‍याउने बैंकको विश्वास रहेको छ। यो खाताका विशेषताहरूः
निःशुल्क एविविएस सेवा
निः शुल्क मोबाइल बैंकिंग सुविधा (प्रथम वर्ष)
निः शुल्क इन्टरनेट बैंकिंग सुविधा (प्रथम वर्ष)
डेबिट कार्डको निः शुल्क वितरण (पहिलो वर्ष)
वार्षिक लकर भाडा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट।
मेडिकल चेक-अप सुविधामा छुट।
श्रृगारका सामग्री उत्पादनहरूमा छुट सुविधा।
२०. ग्लोबल एनआएन बचत खाताः गैरआवसीय नेपालीहरूको विशिष्ट आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नका लागि यो खाता सञ्चालनमा ल्याइएको हो। त्यस कारण बैंकले गैरआवसीय नेपालीको बचत गर्नका लागी छुट्टा छुट्टै खालको स्किम ल्याएको छ।
ग्लोबल एनआरएन एफसीवाई बचत खाता अन्तर्गत जिरो ब्यालेन्समा नै खाता खोल्न सकिनेछ।
ग्लोबल एनआरएन एलसीवाई बचत खाता अन्तर्गत ५ हजार रुपैयाँमा नै खाता खोल्न सकिनेछ।
यो खाताको विशेषताहरू
अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकको लागी इन्टरनेट र मोबाइल बैंकिंग सुविधा
डिपोजिटका लागी एफवाईसीलाई रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्दा खरिद दरमा ८५ प्रतिशत प्रिमियम
होम लोन र अटो लोनमा प्रोसेसिङ फिमा २५ आधारभूत विन्दुमा खातावाला वा उसको परिवारलाई छुट।
क्रेडिट कार्ड निष्कासनमा ५० प्रतिशत छुट।
आईपीओ निष्कासन गर्दै सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी संघको ३२ औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न
सुनको मुल्य ह्वात्तै घट्यो, तोलाको कति ?